Tsy tonga any amin’ny tena mila azy ny fiara vaovaon’izy ireo, raha ny fitarainan’ireo miasa any amin’ny tany lavitra andriana sy faritra mena. Ekena, hoy hatrany ireo namatsy vaovao, fa mbola eo am-pandaminana ny tompon’andraikitra, kanefa iray volana aty aorian’ny fetim-pirenena izay nampisehoana ireo fiara teny Mahamasina mbola vitsy no nahazo izany fa tsy araka ilay isa navoaka tamin’ny haino aman-jery.
Samy niezaka efa nizara izany fiara avy amin’ny fitondram-panjakana izany anefa ny manampahefana ambony tahaka ny teo anivon’ny polisim-pirenena sy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ary ny Tafika Malagasy fa mety misy ihany koa ireo tsy mahandry lahatra. Raha ny fampitam-baovaon’itsy farany izao dia natolotry ny Jeneraly Richard Rakotonirina, minisitry ny fiarovam-pirenena ho an’ny Tafika Malagasy omaly alatsinainy 29 jolay 2019 tamin’ny fomba ofisialy ireo fiara tsy mataho-dalana. Nomarihin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena hatrany fa ireto fiara ireto dia hiparitaka amin’ireo toerana saro-dalana misy ny ZRPS manerana ny Nosy ary koa hapetraka amin’ireo faritany miaramila samy hafa hanaovana fisafoana.